Zimbabwe Opposition Calling for U.S. Sanctions? - allAfrica.com
Zimbabwe Opposition Calling for U.S. Sanctions?
The Movement for Democratic Change opposition alliance has responded to reports that its delegates Nelson Chamisa, Tendai Biti and Jacob Ngarivhume have called for the imposition of sanctions on Zimbabwe by the United States of America. The Donald Trump-led U.S.administration has tabled a raft of tough conditions to be met before full engagement with Zimbabwe and the removal of sanctions, setting the stage for a possible clash with President Emmerson Mnangagwa's Zanu-PF government.
Zimbabwe: Chamisa Scoffs At Zanu-PF Sanctions Propaganda
Zimbabwe Standard, 17 December 2017
MDC-T deputy president, Nelson Chamisa has dismissed as Zanu PF propaganda reports that the MDC Alliance was in the United States to beg for an extension of sanctions, saying as… Read more »
From left, MDC Alliance leaders Douglas Mwonzora, Tendai Biti and Nelson Chamisa (file photo).
Zimbabwe: A Faint Hope for Zimbabwe
New Zimbabwe, 17 December 2017
Decades of Robert Mugabe's ruinous policies have driven his country to economic disaster. But will his successor and former ally be any improvement? Read more »
The Donald Trump-led United States administration has tabled a raft of tough conditions to be met before full engagement with Zimbabwe and removal of sanctions, setting the stage ... Read more »
Zimbabwe: Opposition Denies Urging Trump to Maintain Sanctions